Posted by Tranquillus | Juun 27, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Diyaar ma ahan. Diyaarso Mashruuca Kala-guurka Xirfadeed (PTP). Hab wanaagsan oo lagu aado tababbarka adigoon bixin lacag dime. Saaxiib ka mid ah ayaa ka faa'iidaystay muddada haynta si uu u tababaro. Inta lagu jiro waqtigan adiga ayaa ka taxadaraya feylashahiisa. Waa mucjisada shaqada isgaarsiinta. Markuu soo laabtay, waxaa mahad leh xirfadihiisa cusub. Isaga ayaa hadda mas'uul ka ah maaraynta shaqadaada. Xaaladdan la yaabka leh aad ayey kuu dhibaysaa. Ma tirin saacadahaaga xilliyada adag. Anaguna waanu idin illownay.
Sidee loo diyaariyaa Mashruuca Kalaguurka Shaqaalaha?
Waxaad u maleynaysaa inay tahay waqtigii aad ku horumarin lahayd aqoontaada. Iyo si ballaadhan oo loogu beddelo domains. Xitaa, maxaad u, diyaar garowdid tartan ama imtixaan. Markaa wax walba waxaa loo sameeyaa si waafaqsan xeerarka. Loo shaqeeyahaaga waa in lagu wargaliyaa mashruucaaga kahor bilowga tababarka. Si aad uga faa'iideysato fasaxa tababarka shaqsiyeed ee hore (CIF). Mashruuca Kala-guurka Xirfadleyda ee hadda la yiraahdo. Waa qasab inaad ixtiraamto a tirada shuruudaha.
Maxay yihiin waqtiga kama dambaysta ah iyo shuruudaha in la ixtiraamo si tababarka loo sii wado?
Waxay kuxirantahay kiiskaaga, waqtiyada kama dambeysta ee la ixtiraamayo maahan isku mid.
Ka soo qaad inaad ku jirto CDI joogto ah ama ku meelgaar ah.
Waa inaad dirtaa warqaddaada ugu yaraan 4 bilood kahor bilowga tababarka. Haddii tababarkaagu sii socdo illaa 6 bilood ama ka badan.
Haddii ay dhacdo tababar ka yar 6 bilood ama waqti dhiman. Markaa ugu yaraan laba bilood ayaa kugu filan.
Haddaba ka fikir in aad ku jirtid heshiis ku meel gaadh ah.
Codsigaaga waa in la sameeyaa inta lagu jiro muddada heshiiskaaga. Adoo ixtiraamaya mudo 3 bilood ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad tababarto ka dib dhammaadka heshiiska. Dabcan ma lihid codsi aad u sameysid loo-shaqeeyahaaga. Si kastaba ha noqotee, codsigaaga waa inuu gaaraa CPIR intaad wali qandaraaska kujirto Tanina waa tababar bilaabmi doona illaa 6 bilood kadib dhammaadka qandaraaskaaga.
Haddii aadan ku jirin heshiis waqti go'an ah, laakiin shaqaale ku meelgaar ah. Codsigaaga waa in lagu wajahaa wakaaladda shaqada ku meel gaarka ah ee ku shaqeysa
Codsigayga miyaa la diidi karaa?
CDI, loo-shaqeeyahaagu wuxuu haystaa ugu badnaan bil inuu kuu jawaabo. Majiro wax jawaab ah oo isaga ka yimid. Codsigaaga waxaa loo arkaa inuu yahay mid la aqbalay. Waxay bixiyeen in dalabka la helay waqtigii loogu talagalay. Markaa codsigaaga waa la dhammaystiray oo aad leedahay kala-sareyn kugu filan (24 bilood).
Loo shaqeeyahaagu wuxuu kaloo go'aansan karaa inuu dib u dhigo tababarkaaga. Saddex arrimood ayaa lagu casuumi karaa.
Waxaad ku shaqeysaa qaab-dhismeed ka kooban 100 shaqaale ama kabadan. 2% shaqaaluhu waxay horeyba ugujiraan Mashruuc Kala Guur Xirfad leh. Waa inaad sugto waqtigaaga. Waxaad ku jirtaa liiska sugitaanka.
Waxaad ku shaqeysaa qaab ka yar 100 shaqaale. Shaqaale ayaa ku jira PTP. Waa inaad sugto inta uu tababarka ka soo laabanayo. Kaliya hal qof oo isla muddadaas ah ayaa ku jiri kara PTP.
Maqnaanshahaagu wuxuu dhaawici karaa habsami u socodka ganacsiga. Sababo adeeg awgood, dalabkaaga dib ayaa loo dhigi karaa ilaa 9 bilood.
Feejignaanta 9 bilood laga bilaabo taariikhda bilowga tababarka, oo loo qorsheeyay bixitaanka. Mana ahan laga bilaabo taariikhda aad codsatay. Xaaladdan oo kale, ha lumin waqtiga. U dir warqad cusub oo leh taariikho cusub.
Adiga shaqaale ku meelgaar ah, shirkadda shaqada ku meel gaarka ah dib uma dhigi karto mashruucaaga. Ilaa bilowga tababarka iyo codsigaagu yimaado inta lagu guda jiro isla hawlgalka. Laakiin kiiskan sidoo kale. Haddii aad rabto inaad tababar aado in ka badan 1200 saacadood. Ama si aad u hesho aqoonsi cusub. Tababbarka dib looma dhigi karo.
Waraaq si loogu ogeysiiyo loo-shaqeeyahaaga Mashruuca Kala-guurkaaga Xirfadeed
Waraaqdaada waa in lagu soo diraa warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka. Tani waxay kaa badbaadin doontaa dhibaato badan. Waa inuu ka kooban yahay dhowr macluumaad oo muhiim ah:
Taariikhda iyo muddada tababarka.
Magaca iyo waxa ku jira tababarkan.
Faahfaahinta xiriirka iyo magaca hay'adda bixisa tababarkan.
Mar haddii la helo heshiiski hore ee madaxdaada. Waad iska ilaalin kartaa boostada si loogula hadlo guddiga wadaaga ee khibradda u leh maalgelinta.
Tusaalaha caadiga ah ee codsi loogu talagalay Mashruuca Kala-guurka Shaqaalaha
Ha iloobin inaad sheegtid inaad dalabkaaga sameyneyso. Mawduuc ku saabsan helitaanka meel ka dhex jirta hay'ad tababbaran. Iyo aqbalaadda maalgelinta Mashruucaaga Ku-meelgaarka ah ee ay bixiso hay'adda CPIR ee Wareejinta Kala-guurka ee deegaankaaga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sii joogi karto jagadaada, haddii lacag diidmo ah laguu diido.
U fiirsashada (Sir, Madam)
Gudaha (Magaalada), taariikhda (taariikhda)
Ujeeddo: Codsiga fasaxa maqnaanshaha ee macnaha guud ee a
Mashruuca Kala-guurka Xirfadeed
Shaqaale kooxdeena ah 10 sano hadda. Aniga ayaa mas'uul ka ah maaraynta qalabkeena IT-ga. In kastoo si rasmi ah, waxaan ahay hawl wade soo geliya xogta.
Waqti dheer kadib. Waxaan dareemayaa baahida loo qabo inaan galo tababar u qalmitaan si aan nafsadeyda u hormariyo. Waxaana rajeynayaa inaan bedelo xaaladdayda.
Waxay ku jirtaa ruuxdaas aan ku doortay tababbarka "Kaaliyaha Kumbuyuutarka Kaaliyaha". Waxaa bixiya " Magaca iyo cinwaanka hay'adda tababarka »Iyo iswaafajin kaamil ah Mashruuceyga Kala Guurka Xirfadleyda
Tababarkani wuxuu socon doonaa 30/11/2020 ilaa 02/02/2021 mudo 168 saacadood ah. Sidaas darteed waxaan sharaf ku leeyahay, warqaddan, inaan ku weydiisto fasax maqnaasho muddadan.
Waxaan codsanayaa codsigeyga iyadoo la raacayo xaqiijinta ogolaanshahayga ururka tababbarka iyo maalgalinta mashruucayga ee CPIR ee Transition Pro " Magaca Gobolkaaga ".
Horay ayaan kuugu mahadnaqayaa dhammaan dareenka aad ka bixin doonto codsigeyga. Dabcanna waxaa harsan oo diyaar u ah in laga wada hadlo. Fadlan aqbal (Sir, Madam,) muujinta sida wanaagsan ee aan salaamayo.
READ Qaaciidooyinka edeb leh ee dhammaadka iimaylka ku jira xaalad gaar ah
Soo degso "Tusaalaha caadiga ah ee codsi loogu talagalay Mashruuca Kala-guurka Xirfad-yaqaan"	muunad-nooca-codsiga-mashruuca-is-beddelka-xirfadeedka.docx - La soo dejiyay 426 jeer - 13 KB
Mashruuca Kala-guurka Xirfadlaha ah: Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeBaro Ruush si bilaash ah oo dhakhso leh
socdaQorshaha Horumarinta Xirfadaha: Tillaabooyinka Tababarka Loo-shaqeeyaha loogu talagalay Shaqaalaheeda.